Jikada oo leh bandhigyo: macaacadahaaga indhaha | Bezzia
Maria vazquez | 20/06/2022 20:00 | Qurxinta qurxinta
Dhawaan ma dib u habayn doontaa jikadaada? madbakhyo leh armaajooyin in aan soo jeedino ayaa ku dhiirigelin doona! Armaajooyinka soo bandhigay waxay ku daraan xarrago jikada waxayna aad ugu fiican yihiin soo bandhigida maacuunta iyo qaybo kale oo qurux badan oo aad rabto in qof kastaa arko.
Laakiin taasi maaha faa'iidada kaliya ee lagu daro armaajooyinka qaabeynta jikada. Kuwani waxay sameeyaan Jikada ayaa u muuqata mid fudud, muuqaal aan ka faa'iidaysan karno si aan u samayno jikooyin yaryar ama mugdi ah oo soo jiidasho leh. Miyaad bilowday inaad jeceshahay fikradda ku sharadka jikada leh bandhigyada?
Waxaan soo sheegnay in armaajooyinka ay shakhsiyad ku daraan jikada. Xarrago sidoo kale. Taasna, intaa waxaa dheer, marka aan ku beddelno xalalka kaydinta xiran iyo kuwa mugdiga ah, waxaan gaarnaa meel bannaan oo muuqaal ah. Waa run si aanay isku-darkoodu u noqon mid wax-soo-saar lidi ku ah, waa in la hagaajiyaa, laakiin waxay nooga muuqataa mid aad u yar laakiin marka loo eego. dhammaan faa'iidooyinka oo ah madbakhyo leh armaajooyin.
Haddii aad mar hore ku qanacday inaad ku darto bandhig kale mashruuca jikada, kaliya waa inaad go'aansatid sida loo sameeyo. Oo waa in aad ku dari karto bandhigyada naqshadeynta siyaabo badan waxaanan horeyba u rajeyneynaa in midna uusan ka roonayn mid kale.
1 Armaajooyinka sare oo leh bandhig
2 bandhigyo toosan
3 Beddelka kale
Armaajooyinka sare oo leh bandhig
Tani waxay u badan tahay inay tahay doorashada ugu caansan: ku beddel albaabbada qaar ka mid ah armaajooyinka sare oo leh muraayado si aad u hesho meel iyo iftiin. Sidan oo kale jikada ayaa u ekaan doonta kuwa fudud oo walxaha aad ku kaydsato waxaa laga ilaalin doonaa boodhka ama dufanka.
Fikrad fudud oo aad ku ciyaari karto si aad u gaarto naqshado soo jiidasho leh iyo shakhsi ahaaneed. Sidee? Isticmaalka a Qalab kala duwan oo loogu talagalay bandhigyada taas oo ka dhigaysa inay ka soo dhex muuqdaan golaha wasiirada intiisa kale oo iftiiminaysa gudahooda si ay u soo jeediyaan nuxurkooda.
Waxaa laga yaabaa inaad la yaabban tahay waxa aan ula jeedno bandhigyo toosan. Hagaag, cid kale maahan kuwa guud ahaan haysta dabaqa ilaa saqafka module. Waxay ku qurux badan yihiin goobtaas oo armaajooyinku is raacaan si ay u jebiyaan bilicda derbiga oo ay u iftiimiyaan.
Ma aha in dhammaan bandhigyadu ay noqdaan kuwo habaysan oo lagu dhex daro alaabta guriga; waxaad kaloo ku dari kartaa jikada alaab guri oo xor ah sida kuwa midigta ka muuqda sawirka kore. Haddii aad dhigto meel u dhow miiska jikada waxay noqon doonaan kuwo aad waxtar u leh markaad dejinayso miiska.
Intee ka weyn ayaa ka wanaagsan? Ka fakar waxa aad rabto in aad muujiso oo naftaada ku koob bandhig bandhig oo qaadi kara walxahaas. Sidaan horay usoo sheegnay dalabku waa furaha si ay bandhigyadani u iftiimaan oo ay u weynaadaan, way adkaan doontaa in la ilaaliyo. Ma qiyaasi kartid saamaynta qaska iyo bandhigga khariban ee jikada ku keeno.
Beddelka hore loo sheegay waa kuwa ugu badan laakiin waxaa jira kuwo kale oo badan! Waana in bandhigyadu ay awoodaan lagu daro alaab kasta. Iyo ka hadalka alaabta guriga, qaar ka mid ah kuwa aan ugu jecel nahay waa kuwa isku dara albaabada mugdiga ah ee aagga hoose iyo albaabbada muraayadaha ee saddex meelood meel sare. Waa qaybo ka mid ah alaabta guriga oo iftiimaya gaar ahaan meelo waaweyn oo qolka cuntada la wadaago qol iyo jikada. Ma jeceshahay iyaga?
Bandhiga noocan oo kale ah maaha inuu haysto, marka lagu daro, qoto dheer oo qoto dheer, lagama maarmaanka u ah in lagu kaydiyo suxuunta qaarkood. iyo in loo baahdo meel kaydin badan waxaad had iyo jeer kordhin kartaa qoto dheer, haddii aad rabto, ee armaajooyinka hoose. Sawirrada waxaad ku arki kartaa tusaalooyin nooc kasta ah oo aan hubno inaad jeclaan doonto.
Ma jeceshahay kushiinno leh bandhigyo? Xasuuso in haddii aad rabto inaad soo jiidato dareenka bandhigga, midab kala duwanaansho marka loo eego inta kale ee alaabta guriga ayaa ka faa'iideysan doonta. Haddii, dhinaca kale, aad rabto in golaha wasiirada lagu dhex daro, fikradda waa in la ixtiraamo dhamaystirka iyo midabada isku midka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Qurxinta qurxinta » Jikada leh bandhigyo: macuuntaada oo la arko